लकडाउनमा दुई राजनीतिक परिवारको बिहे : भोजको खर्च को’रोना राहत कोषलाई सहयोग ! – Yuwa Aawaj
लकडाउनमा दुई राजनीतिक परिवारको बिहे : भोजको खर्च को’रोना राहत कोषलाई सहयोग !
बैसाख २९, २०७८ बुधबार 245
काठमाडौं : आइतबार दुई राजनीतिक परिवारमा वैवाहिक कार्यक्रम भयो। एक झापास्थित भद्रपुरमा काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको छोरा श्याम सिटौलाको
अर्को काठमाडौंको बाँसबारीमा नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको। अक्षय तृति’याको मौका छोपी दुबै परिवारमा विवाह सम्पन्न भएको हो। लक’डाउनका कारण कुन्दन र श्याम दुबैले न त पार्टीका पदाधिकारीलाई निम्तो
दिन पाए न त भोज गराउन नै।हाल झापामै रहेका श्याम भन्छन्, ‘परिस्थिति सबैलाई थाह नै छ। कसैलाई निम्तो दिन पाइएन।’ श्यामले झापाकै मनिषा विमलीसँग लगनगाँठो कसेका हुन्। बिहेमा बुवा कृष्ण सिटौला, काका र काकाकी छोरी, चालक र बाबाको अं’गरक्षक गरी जम्मा ५ जना जन्ती गएको उनले सुनाए।
यता नेविसंघका नेता कुन्दनको पनि काठमाडौंको बाँसबारीस्थित मन्दिरमा विवाह भयो। काफ्लेले आइतवार व्यवसायी मेनुका अधिकारीसँग लगनगाँठो कसेका छन्।
लकडाउनका कारण बेहुलीका बाआमा भने विवाह समारोहमा आइपुग्न नपाएको नेविसंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीले जानकारी दिए।’उपस्थिति धेरै छैन। लक’डाउनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरिएको छ। लकडाउनकै कारण बेहुलीका बुबाआमासमेत आइपुग्न पाउनु भएन,’ नेता त्रिपाठीले बताए।
अधिकारीका बाआमा लक’डाउनका कारण दार्जिलिङमै अड्किएको थिए। भोलिपल्ट कोरोना को’षलाई सहयोगविवाहको भोलिपल्ट सिटौला परिवारले भद्रपुर नगरपालिका, कचनकवल, हल्दिवारी र बाह्रदशी गाउँपालिकालाई १ लाखका दरले स्थानीय राहत कोषमा सहयोगको घो’षणा गरे।
आफू घर रहेको भद्रपुरको १० नम्वर वडा र आफ्नो खेती किसानी रहेको बिर्तामोडको १० नम्बर वडालाई ५० हजारका दरले जम्मा ५ लाख रकम स्थानिय सरकारको को’रोना राहत कोषमा दिने वचन दिए।भद्रपुरमा भने श्याम आफैले लगेर रकम हस्ता’न्तरण गरेका छन्।
‘लक’डाउनले गर्दा भोजलगायत अन्य खर्च भएन। यसैले राहतमा दिने पारिवारिक निर्णय भयो,’ श्यामले भने।कुन्दनले पनि पत्नी मेनुकासहित स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर नगद दुई लाख रुपैयाँ को’रोना को’षलाई सहयोग गरेका छन्। सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उनले नगद हस्तान्त’रण गरेका हुन्।
Prevबधाई ! भोटिङमा कुशल भुर्ते र फखर जमानलाई हराउँदै किङ बावर आजम बने ‘प्लेयर अफ द मन्थ’ !
Nextबन्नु छ भने पानी जस्तो बन जो आफ्नो बाटो आफै खोज्ने गर्छ, ढुंगा जस्तो हैन जो अरुको बाटो पनि रोकिदिन्छ – अनमोल भनाईहरू ।
अष्ट्रेलियाकि चेलिले गाएको दर्जनौ नेपाली गितहरु यसरी भाइरल ।(भिडियो सहित)